ओलीको विकल्प ओली नै हुन्
अन्तरद्वन्द्वमा नै आफ्नो भविष्य देख्नेहरु पुनः सरकारमाथी चौतर्फी आक्रमणमा व्यस्त छन् बनिरहेका छन् । संविधान निर्माणपश्चात देशमा चुनाबमा लामो समयपछि नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी (नेकपा)ले बहुमत पाएको छ र सोही पार्टीले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालमा सधै अस्थिरता सृजना भई सरकार बन्ने र भत्कने अवस्थामा नेकपा त्यसमा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको चुनाबमा जनतालेबहुमतका साथ पाँच वर्षका लागि सरकार संचालनको जिम्मेवारी दिएको छ । यही सरकारले नै देश संचालन गरिरहेको छ । यहि समयमा देशमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ को महामारीले सबै पीडित भइरहेको सन्र्दभमा राम्रो काम गरिरहेको, भारतले अतिक्रमित भूमिलाई नेपालको नक्सामा नै समाहित गरि संसदवाट नै संविधान संशोधन गरिरहेको सन्दर्भमा आफ्नै सरकारमाथि आफ्नै पार्टी भित्रबाट गरिने प्रहार नेपाल जनतालाई सह्यै हुन सक्दैन ।
विशेष गरेरकेपी ओलीको सरकारले देश र जनताको आवाजलाई सम्वोधन गरि भारतिय विस्तारवाद र भष्टाचार विरुद्धको अभियानमा धावा बोलेको कुरा जगजाहेर नै छ । यहि परिवेशलाई लिएर देशमा सधै अस्थिरतामा खेलेर आफ्नो भूमिका खोज्नेहरुको साथ लिएर भारत नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छ । देशमा प्रतिपक्ष राजनैतिक दलसमेत सरकारको काम कारवाहीमाथी प्रश्न चिन्ह खडा गर्न नसकेको सन्दर्भमा नेकपा भित्रबाट नै सरकारको सकारात्मक काम देख्न नसक्ने भनेको पुर्वाग्रही र स्वार्थ बाहेक अन्य केहि हुन सक्दैन । नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा एजेण्डा भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भनेको देशलाई पुनः अस्थिरता निम्ताउने भन्दा अन्य हुन सक्दैन । यहि बुझेको भारत नेपालमा नेकपा का नेताहरुलाई नै प्रयोग गरेर ओली सरकार हटाउने अभियानमा लागेको छ भने स्वार्थकेन्द्रित राजनैतिक दलहरु भारतको गुलामी गरेर शक्ति र सत्ता हत्याउने अभियानमा लागेका छन् । जुन नेपाली जनताको भावना विपरित शिवाय अन्य हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको धारणाले देशको नैतिकतामाथी प्रश्न चिन्ह खडा भएको दावी गर्नेहरुले आफनो भूमिका चाहि हेर्नु पर्देन ? देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतमा ओलीको जस्तो भूमिका कोही नेतासँग तुलनायोग्य कसरी हुन सक्दछ र ?
वर्षैपिच्छे सरकार बनाउनमा व्यस्त बनेको नेपालमा स्थायी सरकारको चाहना स्वरुप नै ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकार हो । जुन आम जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व ओली सरकारले गर्दछ । देशमा स्थिर सरकार होस र विकास निर्माण र आर्थिक रुपमा नेपाल सवल र सक्षम बनोस, यहि आम जनता चाहन्छन र ओली सरकार पनि त्यहि बाटोमा क्रियाशिल रहेको छ । जनताको आम चाहना बिपरित पुनः बहुमत दिएको नेकपा भित्र नै शक्ति र सत्ताका लागी आफनै पार्टीको नेतृत्वको राजीनामा माग्ने भनेको घर जलाएर खरानीको चाहना गर्नु शिवाय अन्य केहि हुदैन ।
ओलीको विकल्प को त ? ओलीले के गरे जसले देशको हित विपरित हुन गयो ? त्यसको मुल्यांकन नगरी फगत स्वार्थताका लागि ओलीको राजीनामा माग्ने भनेको दलाली शिवाय केहि हुन सक्दैन । ओली सरकारको विकल्प अहिलेको सन्दर्भमा अन्य हुन सक्दैन । ओलीलाई हटाएर अन्य कोही प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष हुँदैमा एकैचोटी परिवर्तन हुनेवाला केहि छैन । यी सबै कुरा जान्दा–जान्दै पनि पार्टीका अर्का अध्यक्ष लगायत स्वार्थ नेताहरुले ओलीको बर्हिगमन रोज्नु भनेको आफै पतन हुनु शिवाय अन्य हुन सक्दैन । किनकी पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड होस वा माधव नेपाल सबै जनताबाट तौलिइसकेका पात्र हुन् । जसबाट आम जनताले कुनै पनि नयाँपनका आभास गर्न सक्दैनन । जुन कुरा उनिहरुको कार्यशैलीबाट पुष्टि भईसकेका छन् ।
नेकपा ठुलो पार्टी बन्नुमा सबै नेताको भूमिका भएता पनि मुख्य भूमिका भनेको केपी ओलीको नै हो । यो एकमात्र सत्य हो । जुन लुकाउन र ढाक्न सकिदैन । यो आम जनताले बनाएको सवैभन्दा ठूलो पार्टी ओलीको कार्यदिशा, योग्यता र क्षमता देखेर नै हो । जुन परिणाममा पनि देखियो । यति धेरै सफेद हुदाँ–हुदै पनि सत्ता र शक्तिको लोभमा परेर देश र विश्व नै चकित पर्ने गरि ओलीको राजिनामा माग्नु भनेको बनिसकेको घरमा बस्न खोज्नु शिवाय अन्य हुन सक्दैन । जुन आम जनताले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । किनकि तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रको हैसियत पनि नेपाली जनताले देखिसके । सरकारमा हुदाँ विदेशी सामु लम्पसार पर्ने, केहि गर्न नसक्ने, अनि ओलीको वैशाखी टेकेर हान्ने भनेको न्यायसंगत हुन सक्दैन । सरकारको काम कारबाही आम जनताले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । सरकारले जनहितमा राम्रो काम गरेको आम जनताले आभास गरिरहँदा पार्टी भित्रबाट नै राजीनमा मागिनु भनेको दलाली र कमजोर मानसिकता अन्य होईन । ओलीले नै नेकपालाई पहिलो पार्टी बनाएको हो । अर्काले ठूलो वनाएको पार्टीमा लोभ गरेर नेतृत्व गर्न खोज्नु भनेको भंयकर राजनैतिक बेईमानी शिवाय अन्य हुन सक्दैन । सरकारको बारेमा स्थायी कमिटीका निश्चित व्यक्ति के भन्छन भन्दा पनि आम जनता के चाहन्छन ? भन्ने महत्वपुर्ण विषय हो । अहिलेको सन्र्दभमा नेपाली जनताले केपी ओलीको सरकार नै चाहन्छन् । सीमित नेताहरु दिग्भ्रमित हुन आवश्यक छैन । चाहना हुन गलत हैन, तर अनावश्यक ढिपीले राम्रो गर्देन ।
नेकपाको नेतृत्वका लागी महाधिवेशनबााट चुनिनु पर्ने व्यवस्था विपरित कर्नरमा पारेर नेतृत्व हत्याउनु खोज्दा भोली हुने दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिन्छ ? हिजो १५ वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेर तेस्रो पार्टी बनाएकोे माधव नेपाल पनि प्रचण्डको पछाडि लागेर ओलीको राजीनामा माग्नुले माधव नेपाल आम जनता प्रति संवेदनशील छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । रहरले हैन, आवश्यकताले नेतृत्वको उदय हुन्छ, अहिलेको आवश्यकता भनेको ओली नै हो । जुन आम जनताको भावना हो । यो भन्दा बाहिर गएर गरिने क्रियाकलापको नेपाली जनताले अवश्य पनि मल्यांकन गर्ने नै छन् । हिजोको प्रचण्डको हैसियत र माधव नेपालको हैसियत आम नेपालीले नापिसकेका छन् । ओलीले बनाएको पार्टीमा ओलीलाई नै हटाएर आफुले राज गर्ने दुस्साहस कसैले नगरेको राम्रो । अवको पुस्ता कसैको दास मानसिकताको दलाल बन्न सक्दैनन । राम्रो र नराम्रो कार्यकर्ताले मात्र होईन, जनताले पनि गरिरहेका छन् । कामको आधारमा मुल्यांकन भन्दा पनि सत्ताका लागि गरिएको तिकडमले पार्टीलाई मात्र होईन, देश र आफैलाई पनि प्रतित्पादक हुन जान्छ, त्यो कुरा ओलीको राजीनामा माग्ने दलालहरुले बेलामा नै सोचेको राम्रो । नभए राम राम त भनिएला, काँध थाप्न सकिदैन ।
पुस्तातन्तरण आवश्यक छ । तर, त्यो पुस्तान्तरण माधव, प्रचण्ड र झलनाथ हैन, दोश्रो पुस्तामा आउनु पर्दछ । किनकी सवै नेतृत्वलाई जनताले नजिकबाट नियालिसकेका छन् । नेकपामा एकसे एक दास्रो पुस्ताका नेताहरु छन् जसले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दछन् । ओलीको सरकार ढालेर प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष बन्दा हुनेवाला केहि छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको ओली नै हो । ओलीको सरकार ढालेर देश र आम जनताले कहि प्राप्त गर्न सक्दैन, मात्र देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने देश भित्र र बाहिरको दलालीहरु सल्वलाइर अस्थिरता निम्ताउने शिवाय केहि हुन सक्दैन । महाधिवेशन पछि वा अर्को चुनावमा पहिलो पुस्ता अव स्वीकार्य हुन सक्दैन । किनकि पहिलो पुस्तामा नै रहने हो भने देश विकास कदापी सम्भव छैन । जुन आम जनताले वुझिसकेका छन् ।